पत्रकारलाई दीपिकाको प्रश्न: सुशान्तको भिडियो खिच्ने अनुमति लिनुभयो ? दीपिकाले लेखेकी छिन्, 'तपाईंले भिडियो बनाउनु भयो ठीकै छ । तर, यसलाई तपाईंले 'मोनिटाइज' पनि गर्नु भएकै होला । के तपाईंले सुशान्तको परिवारसँग भिडियो खिच्न अनुमति लिनुभयो ?' कला / साहित्य . समाचार१० असार २०७७
सुशान्तको कथामा 'सुसाइड और मर्डर' बन्ने बलिउड चलचित्र निर्माता विजय शेखर गुप्ताले सुशान्तको आत्माहत्याको विषयलाई लिएर चलचित्र बनाउने घोषणा गरेका छन् कला / साहित्य . समाचार९ असार २०७७
नारायण रायमाझीको 'के लेखौँ र खबर आमा' सार्वजनिक सार्वजनिक गरिएको गीतमा नारायण रायमाझीका स्वर्गीय दाई लक्ष्मण रायमाझीको शब्द छ । गीतमा नारायणले नै संगीत भरेका छन् कला / साहित्य९ असार २०७७
सफल रेसको तयारीमा अनमोल अनमोलले आफू सफल रेसको तयारी गरिरहेको बताएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एक तस्वीर पोस्ट गर्दै आफू सफल रेसको तयारीमा रहेको खुलासा गरेका छन् कला / साहित्य . समाचार९ असार २०७७
मिलन भन्छन्- 'अरुलाई प्रोत्साहित गर्न चलचित्र बनाउन लागेँ' युद्धको कथामा निर्माण हुन लागेको यस चलचित्रको कथा मिलन आफैँले तयार गरेका हुन् । चलचित्रको पटकथा मिलन र उनका सहायक निर्देशक गिरिराज घिमिरेले तयार गरिरहेका छन् कला / साहित्य . समाचार९ असार २०७७
लीला-सौन्दर्यको कसीमा सुन्दरका सुन्दर कथाहरू हिजोको शैली र प्रविधिले आजको जटिलताको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि, आजकै सजिलो आजले जन्माउनुपर्ने नै हो । हिँडिरहेको बाटो, बसिरहेको आसन, सुनिरहेको सङ्गीतलाई छाडेर नयाँतिर लाग्नुपर्दा असजिलो हुनु स्वाभाविक छ तर त्यो पनि केही कालपछि बानी लागिहाल्छ विचार . कला / साहित्य८ असार २०७७
'नेपोटिज्म'को चर्चा चल्दै गर्दा पलको प्रश्न- 'के तपाईंले समयमा पारिश्रमिक पाउनुभएको छ ?' नायक पल शाहले भने अहिले फरक प्रश्न खडा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले एक स्टाटस लेख्दै केही प्रश्न गरेका छन् कला / साहित्य . समाचार८ असार २०७७
किन प्रेम स्वीकार गर्दैनन् बले र प्रिज्मा ? यत्तिका चर्चा हुँदा पनि दुवै जना यस विषयमा मौन छन् । न सागरले केही बोलेका छन्, न प्रिज्माले नै यसमा उत्तर दिएकी छन् । उनीहरू दुवैले आफ्नो प्रेमलाई स्वीकार्न वा नकार्न सकेका छैनन् कला / साहित्य . समाचार८ असार २०७७
युट्युब ट्रेण्डिङको शीर्ष स्थानमा 'ए है माया' मेलिना राई र सरोज वलीको स्वर रहेको गीत 'ए है माया' युट्युब ट्रेण्डिङको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । तीन दिनअगाडि सार्वजनिक भएको याे गीतले १८ लाख ७२ हजारभन्दा बढी भ्यूजसहित ट्रेण्डिङको शीर्ष स्थान कब्जा गरेको हो कला / साहित्य . समाचार८ असार २०७७
कलाकार बन्न प्रियङ्काका यस्ता 'टिप्स' एक फ्यानले प्रियङ्कालाई कलाकार कसरी बन्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले सोधेका छन्, 'मलाई चलचित्र क्षेत्रमा कलाकार बन्ने मन छ । त्यसका लागि के गर्नुपर्छ ?' कला / साहित्य . समाचार८ असार २०७७
कोरोना कला / साहित्य७ असार २०७७
सुशान्तको आत्महत्यापछि के भने सलमान खानले ? अभिनेता सलमान खानले आफ्ना फ्यानहरुलाई सुशान्तको फ्यानलाई साथ दिन आग्रह गरेका छन् । सलमान र सुशान्तको फ्यानहरु बीच सामाजिक संजलमा द्वन्द्व बढेपछि सलमानले यस्तो आग्रह गरेका हुन् कला / साहित्य . समाचार७ असार २०७७
च्याम्पियन टिमले सुरु गर्दै 'घरघरमा कमेडी' कमेडी च्याम्पियन टिमले 'घरघरमा कमेडी' नामक रियालिटी शो सुरु गर्ने भएको छ कला / साहित्य . समाचार७ असार २०७७
'भुज'मा द्वन्द्व निर्देशन गर्दै अजय चलचित्रमा समावेश हुने एक्सन दृश्यहरूको निर्देशन अभिनेता देवगणले नै गर्नेछन् । अहिले अजय त्यसैको तयारीमा लागिरहेका छन् कला / साहित्य . समाचार७ असार २०७७
दर्शक करणलाई अनफलो गर्ने, करण चलचित्रकर्मीलाई ! निर्माता तथा निर्देशक करणले पनि आफ्नो ट्वीटरबाट धेरैलाई अनफलो गरेका छन् । उनले ट्वीटरमा जम्मा ८ जनालाई बाँकी राखेर अन्य सबैलाई अनफलो गरेका छन् कला / साहित्य७ असार २०७७
कोरोनामुक्त भइन् अभिनेत्री निरिशा झण्डै दुई साताअगाडि गरिएको परीक्षणमा कोरोना 'पोजिटिभ' देखिएको थियो कला / साहित्य . समाचार७ असार २०७७
नायिका सोनाक्षी सिन्हाले ट्वीटरलाई लेखिन् अलविदा बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर चलाउन छाडेको घोषणा गरेकी छन् । उनले ट्वीटरबाट ‘अलबिदा’ आफ्नो एकाउन्ट निष्क्रिय गरेकी छन् कला / साहित्य७ असार २०७७